July 6, 2020 1394
सोमबार नेपा’ली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज ३ सय रुपैयाले घटेर प्रतितोला ९० हजार २ सय रुपैया’मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्याव’सायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ७६० रुपैयामा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्यमा भने घटबढ भएृको छैन । आ’ज चाँदीको मूल्य प्रति’तोला ९४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्…निकै धनी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
धनी बन्ने चाहना कसको हुँदैन र ? भनिन्छ, धन भनेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन्। मनग्य धन आर्जन गरेर सुखमय जीवन जीउने मन सबैको हुन्छ। त्यसो त कति धन कमा’उने भन्ने कुरा कर्मको फल पनि हो ब्यक्तिले धन कमाउनका लागि के काम गर्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो।
कसले कति कमा’उँछ र कमाएको सम्पत्ति’लाई कसरी परिचालन गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपी कतिपय अवस्थामा मेहनत गरेर मात्रै पनि पुग्दैन । ग्रह गोचर राशि लग्नले पनि प्रभाब पारेको हुन्छ।
यदी तपाईँलाई ज्योतिष शा’स्त्रमा विश्वास लाग्छ भने हामीले ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएका केही राशिका बारेमा यहाँ जानकारी गराउने छौँ। जुन राशिका व्यक्ति’लाई धनले पछ्याइ’रहेको हुन्छ।
ती राशिका व्यक्तिले विलासी जीवन जिउनु साथसाथ धन कमाउने विभिन्न अवसरहरु हात पार्ने गर्दछन्।हेर्नुहोस् भिडियोमा… कुन कुन हुन् ति भाग्यमानी राशि….
प’क्राउ गर्न प्रहरी पुग्दा झाँक्री भन्छिन्: प्रधान’मन्त्री र राष्ट्र’पतिको अन्त्यको दिन आएछ (भिडियो)